Minghe LED display သည် Miao သီချင်းနှင့်အကကိုအခွအေနေအတွေ့အကြုံပြသသည့်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ Jinxiu Danzhai-News-Hunan Minghe Opto Tech Co. , Ltd
Minghe LED display သည် Miao သီချင်းနှင့်အကအခုန် Jinxiu Danzhai ၏အခြေအနေဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုပြသသည်
အချိန် - 2020-08-31 hits: 43
၂၀၁၅ မှ ၂၀၂၀ အထိအရေးအပါဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုအနေဖြင့်တရုတ်သည် ၂၀၂၀ တွင်အကြွင်းမဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ ဤရာစုနှစ်အတွင်း၌အစိုးရသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရှိဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးကိုဆက်လက်အားပေးခဲ့သည်။ Jinxiu Danzhai သည်ဤလှုပ်ရှားမှု၏အဓိကစီမံကိန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Guizhou ရှိအခွအေနေအတွေ့ကြုံဒရာမာသည်။ Minghe Group သည်ဗွီဒီယိုစနစ်အတွက်အလုံးစုံသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
Jinxui Danzhai သည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုပေါင်းစပ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှု၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ Jinxiu Danzhai ကိုနေ့ချင်းညချင်းကျော်ကြားပြီးသန်းကြွယ်သူဌေးများအနေဖြင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက် "Miao သီချင်းနှင့်ကခုန်ခြင်း၏အံ့မခန်းဖွယ်ရာဒရာမာ!"၊ "မယုံနိုင်စရာ၊ ငါဒန်ရှိုင်းတွင်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖျော်ဖြေမှုပြုလုပ်ရန်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါ!" ... များစွာသောဆင်တူအသံရှိပါတယ်။
ထိတ်လန့်ခြင်းသည်ပရိသတ်ကိုဝေမျှပြီးနောက်တူညီသောခံစားမှုဖြစ်သည်။ သူရဲကောင်း၏ကံကြမ္မာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပုံဖော်ရုံသာမကဇာတ်စင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအမြင်အာရုံမှပါလာသည်။ ဒါဟာ 3D ရုပ်ရှင်ကိုတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေသလိုပါပဲ။
Jinxiu Danzhai သည်ရှေးဟောင်းဒဏ္legာရီတစ်ခုအားပြောပြသော်လည်းအလွန်ခေတ်မီသောနည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရဲရင့်သည်။ စင်မြင့်တွင်မြင့်မားသောသတ်မှတ်ထားသော LED မျက်နှာပြင်များကြီးမားသောbothရိယာကိုနှစ်ဖက်စလုံးမှတစ်ခုစီစီစီစဉ်ထားပြီးလွတ်လပ်စွာဆန့်နိုင်သည်၊ သို့ဖြင့်စင်မြင့်တစ်ခုလုံးသည်နက်ရှိုင်းသောခံစားမှုနှင့်စတီရီယိုစကုပ်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပရိသတ်ကိုနှစ်မြှုပ်ခြင်းနှင့်ပြည့်၏။
ရှေ့သို့ MHG သည် Chongqing International Circus အတွက် One-Stop Solution ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: MHG LED Ellipsoidal Light သည် Sunshine ပြဇာတ်ရုံ ၃၀၃ ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံရိပ်သက်ရောက်မှုဖြင့်ကူညီသည်။